အလွန်အလုပ်ရှုပ်သော ကျွန်မ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အလွန်အလုပ်ရှုပ်သော ကျွန်မ …
အလွန်အလုပ်ရှုပ်သော ကျွန်မ …
Posted by weiwei on Aug 10, 2011 in My Dear Diary | 20 comments
ကျွန်မကို အခုတလော ဘာတွေအလုပ်ရှုပ်နေလို့ ပို့စ်လဲမတင် အွန်လိုင်းမှာလဲမတွေ့တာလဲလို့ မေးကြတယ် .. ဘာတွေများဒီလောက်တောင် အလုပ်ရှုပ်နေတာလဲဆိုတော့ …
အလုပ်ချိန်ကတော့ အလုပ်ရှုပ်ရှုပ် မရှုပ်ရှုပ် တာဝန်ချိန်ဆိုတော့ ရုံးခန်းထဲမှာ မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ အလုပ်ချိန်ပြင်ပ ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကတော့ ဘယ်လိုမှ သက်တောင့်သက်သာမရှိလောက်အောင် အလုပ်ရှုပ်ပါတော့တယ် …
ကျွန်မကို ကုမ္ပဏီက စက်ရုံနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းပေးပြီးနေခိုင်းထားပါတယ်။ ၄ လွှာ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာနေရပြီး အခန်း စုစုပေါင်း ၇ ခန်းပါတဲ့ တိုက်ခန်းဒေါင့်ခန်းဆိုတော့ ပြတင်းပေါက် ၂၀ ကျော် ပါပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့အတူလိုက်နေပေမယ့်သူမရှိတော့ တစ်ယောက်ထဲပဲ နေလိုက်တယ်။ နွေရာသီတုန်းက သိပ်မသိသာပေမယ့် မိုးတွင်းရောက်တော့ ရေကြီးပါလေရော။ အနောက်ဘက်က ပြူတင်းပေါက်တွေကနေ ပက်လိုက်တဲ့မိုးရေတွေ ဂေါ်ပြားနဲ့တောင်ကော်ထုတ်ရပါတယ်။ စောင်အဟောင်း မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အဟောင်းတွေနဲ့ မိုးရွာတိုင်း သုတ်လိုက် လျှော်လိုက် လှမ်းလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာတင် တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက် သန့်ရှင်းရေးအတွက်အချိန်ကုန်ရပါတယ်။ မျက်နှာကျက်ပေါ်က ယိုတဲ့မိုးရေတွေကို ပုံးလေးတွေနဲ့ လိုက်ခံရသေးတယ်။ မိုးမရွာရင် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းအောင် ပြူတင်းပေါက်တွေအကုန်ဖွင့်ပြီး မိုးရွာတာနဲ့ အမြန်လိုက်ပိတ်ရတာလဲ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်လာတဲ့ နံရံတွေကို ပန်ကာနဲ့မှုတ်ပေးပြီး ခြောက်အောင် လုပ်ပေးရသေးတယ်။ စိုထိုင်းထိုင်းနဲ့ မှိုအနံ့လိုဖြစ်လာတာကို မခံနိုင်လို့ ခြင်ထောင် အိပ်ယာခင်းတွေကို ၅ ရက်တစ်ခါလောက် လျှော်လိုက်လဲလိုက်လဲ လုပ်ရသေးတယ်။ အ၀တ်လျှော်ဖို့နဲ့ အ၀တ်လှမ်းဖို့ ရာသီဥတုကို ကြည့်ရတာလဲ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ မီးပူမတိုက်လို့မရတာမို့ မီးပူတိုက်ရတာကလဲ အလုပ်တစ်ခု။
သန့်ရှင်းရေးတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး … နေ့စဉ် ၃ နပ် ထမင်းစားဖို့ကလဲ အလွန်အလုပ်ရှုပ်ပြန်ပါတယ်။ အပြင်ကအစားအစာတွေကို ၀ယ်စားချင်စိတ်မရှိတာနဲ့ မုန့်ကအစ ဟင်းအဆုံး တစ်ယောက်စာကို ကိုယ်တိုင်ချက်စားရတော့ အလုပ်မရှုပ်ပဲ ခံနိုင်ပါတော့မလား။ ဈေးသွားပြီး ဟင်းချက်စရာတွေဝယ်ရတယ်။ တချို့ပစ္စည်းတွေက စီးတီးမတ်လို ဆိုင်တွေမှာမှရနိုင်တာမို့ စီးတီးမတ်လဲ ပြေးရသေးတယ်။ ဟင်းတစ်ခွက်ရဖို့ ဈေးဝယ်ရ၊ ခုတ်ထစ်ထုထောင်းရ၊ ချက်ပြုတ်ရ၊ ဆေးကြောရတာတွေက စားရတာနဲ့ မတန်အောင်ရှုပ်လှပါတယ်။ ဒါတောင်မှ အလွယ်ဆုံးဖြစ်မယ့် easy cook တွေပဲ ချက်စားဖြစ်လို့။
မနက် ၇ နာရီခွဲ ဖယ်ရီအမှီ နေ့လည်စာနဲ့ မနက်စာအပြီးဖြစ်အောင် လုပ်ရတာက ယားလို့အောင် မကုတ်အားနိုင်အောင် ပါပဲ။ ညနေ ၅ နာရီ အလုပ်ဆင်းပြီးတာနဲ့ ရေကူးကန် (မိုးရေယိုလွန်းလို့) လို့ နံမည်ပေးထားတဲ့ အိပ်ခန်း ၃ ခန်းနဲ့ စတင်အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ဈေးဝယ်ရတာ၊ ချက်ပြုတ်ရတာ၊ စားသောက်ရေမိုးချိုး အားလုံးလဲပြီးရော ည ၉ နာရီလောက်ဖြစ်ပြီး တော်တော်လေးလဲ ဒေါင်းသွားပါပြီ။ နောက်တစ်နေ့မနက်စာ ချက်ပြုတ်ဖို့ အဆင့်ပြင်ပြီးချိန်မှာတော့ ဘာမှထပ်မလုပ်ချင်တော့ပဲ အိပ်ချင်စိတ်တစ်ခုထဲသာရှိပါတော့တယ်။
ကဲ … တစ်ယောက်ထဲနေပြီး ဘာတွေများအလုပ်ရှုပ်နေတာလဲလို့ မေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီပို့စ်ရေးပြီး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိန်သွားတယ် အားကျလိုက်တာလို့ ပြောကြတဲ့ အ၀လွန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ကျွန်မလိုနေ့တိုင်း ကြမ်းတိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်ကြည့်ကြပါလို့ ….
တခြားသူတွေလဲ ကျွန်မလိုပဲ အလုပ်ရှုပ်ကြမှာပါ။ ကျွန်မက အခုလို ပိုထူးပြီး ခံစားရတာက အပိုအလုပ်လုံးဝမရှုပ်တဲ့ အလွန်သက်သာတဲ့ဘ၀တစ်ခုမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေပြီး အခုရေးထားသလိုဘ၀မျိုးကြုံရလို့ တစ်နေ့တစ်နေ့ အပိုအလုပ်တွေ … အပိုအလုပ်တွေ … ဆိုပြီး တကယ်အရေးပါတဲ့ အလုပ်အတွက် စဉ်းစားချိန်မကျန်တဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ကြီးကို စိတ်ပျက်မိလို့ …
အော်…မိုးရွာလို.အလုပ်ရှုပ်တာကိုး… ။ မိုးမရွာရင်အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့။
မိုးမရွာရင်တော့ အလွန် အလုပ်မရှုပ်ပဲ .. နဲနဲပဲ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့နော် ….
ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်မပေးချင်တဲ့ အိုင်ဒီယာက ….
ကျွန်မတို့တွေ အခြေခံစားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေမှာ အပိုအလုပ်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေရတာကို ဆိုလိုချင်တာပါ …
ကျွန်မ တရုတ်ပြည်မှာနေတုန်းက စာရေး၊ စာဖတ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ တရားနာ၊ ဘုရားရှိခိုး …စသဖြင့် ကုသိုလ်အလုပ်တွေ၊ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေ၊ ရှော့ပင်းထွက်၊ ပန်းခြံသွား စသဖြင့် အလုပ်အများကြီးကို သက်တောင့်သက်သာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်လဲပိုကောင်းပြီး အတွေးအခေါ်လဲ ပိုမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ … ဘာမှ ရေးချင်စိတ်မရှိအောင် မတွေးနိုင်အောင် ပင်ပန်းရတဲ့ဘ၀မျိုးဆိုတော့ …
the poorest country in Asia Pacific Region??? ကိုဖောရိန်းရေးတဲ့ပို့စ်အတွက် အကြောင်းရင်းလေးတစ်ခုများ ဖြစ်မလားလို့ ကျွန်မတစ်နေ့တာဘ၀လေးကို ရေးလိုက်မိပါကြောင်း ….
အလဟဿအချိန်ကုန်ပြီး လူပင်ပန်းတာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲ
သေးသေးမွှားမွှားကိစ္စတွေဆို အန်တီဝေအခန်းမှာ မိုးရွာတဲ့အခါ အလုပ်ရှုပ်ရတာပေ့ါ
ဒီကိစ္စက မိုးရေစိုလို့ဖြစ်ရတာ၊ လူတိုင်းမလုပ်မဖြစ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး
ဈေးနီးတဲ့လူနဲ့ ဈေးနဲ့ဝေးတဲ့လူမှာ ဝေးတဲ့လူကတော့ အလုပ်ပိုရှုပ်ရတာပါပဲ
မီးလာတဲ့အချိန်နဲ့ မီးပျက်တဲ့အချိန်လည်း ချက်ရေးပြုတ်ရေးကအစ မတူပါဘူး
အ၀တ်လျှော်ပြီးလှန်းဖို့အတွက်လည်း လှန်းစရာနေရာရှိရင် မိုးရွာရင်လည်း အရမ်းဒုက္ခမရောက်ဘူး (တခါတည်းခြောက်တဲ့ အ၀တ်လျှော်စက်လေးနဲ့ဆို အိုကေပေါ့၊ မီးလာရင်)
အခြေခံနေမှုထိုင်မှုကိစ္စတွေအတွက် အဆင်ပြေ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် စီမံထားတာမရှိဘူးလေ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံက အခုမှ ကုန်းရုန်းပြီး ကြိုးစားနေခဲ့ရတာလဲတစ်ပိုင်းပါတယ်။
နောက် တစ်ချက်က ကျနော်တို့နိုင်ငံက အိမ်ခန်းနေထိုင်သူများရဲ့တာဝန်မဲ့တာလဲပါတယ်။
တိုက်ခန်းတွေက စဆောက်စက အကောင်းပါ။
ဒါပေမယ့် ငှားနေသူအများစုက ကိုယ်ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းစပျက်ရင် မပြင်ပါဘူး။
မိုးယိုလဲခေါင်မပြင် ရေ၀င်လဲ ခတ်မထုတ် သက်သာသလိုနေကြတာများပါတယ်။
အဲတော့ တစထက် တစ ပိုပျက်တာပေါ့။
အခုမဝေက သိတတ်စွာနဲ့ ကိုယ်ထူုကိုယ်ထ+ ရေခတ်ထုတ်တာကိုး။
အတော်များများ အိမ်ငှားက ရေကန်မကလို့ ပင်လယ်ဖြစ်သွားပေ့စေ အေးဆေးဘဲနေတတ်ကြတာ။
တိုင်းပြည်ကလဲ ပြည်သူကို စောင့်ရှောက်ဘို့ လိုအပ်သလို ပြည်သူက လဲ ပြန်လည် စောင့်ရှောက်ဘို့လုပ်အပ်ပါတယ်။
အခုတော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြစ်တင်တဲ့အဆင့်မှာတင်ရပ်နေပါတယ်။
လူတိုင်း ဘ၀က အတူတူပါပဲ မမဝေရယ်။ ဒီဘောင်ထဲကနေ မထွက်နိုင်ကြပါဘူး။
အခန်းကျယ်တော့ ပိုပြီး အလုပ်ပိုရှုပ်တာပေါ့နော် မဝေ…. ဒီလိုပါပဲ ဘ၀ဆိုတာ အမြဲရုန်းကန်နေရတာပါပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံမှမသွားတဲ့သူတွေအဖို့တော့ အမြဲတမ်းဒီလိုပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် သိပ်မသိသာပေမယ့် မမဝေတို့လို့ တရုတ်ပြည်မှာ အနေများလာတဲ့သူကျတော့ ဒါကို အလုပ်တစ်ခုလိုမြင်မိတာလည်း မဆန်းပါဘူးရှင်။ တချို့ဆို မိုးရေယိုဖို့နေနေသာသာ နေဖို့အိမ်တောင်မရှိတဲ့သူတွေ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေပါသေးတယ်ရှင်။
အိမ်အလုပ် ရုံး အလုပ် နှစ်ခုဖြင့် မအားလပ်အောင် ရှိသူအပျိုကြီး မမ များအတွက် အိမ်ဖော် ငှားရန်ရှိသည်။
အချက် အပြုတ် အလျော် အဖွပ် ဈေးသွားငါးဝယ် အိမ်သန့်ရှင်းရေး အပင်စိုက် ခြံရှင်း အကုန်နိုင်သည်။
လစာ တစ်လ ပေါင် ၂၀၀၀ ပေးရမည်၊ တစ်နေ့လျှင် ဗွီဒီယို တစ်ခွေ ငှားပေးရမည်၊ ကာတွန်း ၀တ္တု ဖတ်ခွင့်ပြုရမည်၊ အမှားလုပ်မိလျှင်မဆူရ၊ အိမ်ရှင်စားသလို ကြွေးရမည် အဆင့်အတန်းမခွဲရ၊ အိမ်ဖော်ဟုမသုံးနှုန်းရ၊ တစ်လတစ်ခါ အိမ်ပြန်ခွင့်ပေး၇မည်၊
ရောက်ရာနေရာရည်းစားထား ၍ အိမ်နီးချင်း ယောက်ျားလေးများနှင့် အရောတ၀င်နေ တတ်ပြီး ခြေဆော့လက်ဆော့ ရှိကာ အိမ်ရှင်ဧ၊၊် အလှပြင် ပစ္စည်းများအား အလစ်တွင် ယူသုံးတတ်သည်မှအပ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ပြီး ( ဟင်းခိုးစားတတ်တာမပါ) စိတ်မထင်လျှင် အိမ်ရှင်အား မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးဖြင့်ပြန်လှန် ရန်တွေ့တတ် သည်မှလွဲလျှင် ရိုကျိုးနာခံတတ်သော သူဖြစ်သည်။
မငှားပါရစေနဲ့ အဘဆွေ …
လခလဲမပေးပါနဲ့ … ထမင်းပဲကျွေးပါ ဆိုရင်တောင်မှ လက်မခံနိုင်လို့ပါ …
တိုင်းတပါး ထွက်ပြီး အိမ်ဖော်အလုပ်ကို ရိုရိုကျိုးကျိုး လုပ်ကြတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ အိမ်ဖော် တယောက် ၇သောင် ၈သောင်း ရတဲ့ လူတွေ ရှိတယ်။
ပိုက်ဆံ ပေးသလို တန်အောင် လုပ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်မရှိကြသေးတာတော့ အမှန်ပဲ။
ဆူးရေ ပြည်ပက အိမ်ဖော်တွေက အားလုံးကို စက်နဲ့ပဲ လုပ်ကျတာလေ။ လူအပင်ပန်း မခံကြတော့ဘူး။ မမှီ မြင်သလောက်ပြောရရင် ဘယ်နေရာမှာမှ လူက ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်တာမတွေ့ရဘူး။ တခါသား လမ်းဘေးမှာ ကျင်းတူးတယ် စက်နဲ့ပဲ ပြီးတော့ စက်နဲ့ပဲ အင်္ဂတေပြားကြီးတွေချပြီး နံရံကာ ပြီးတော့ နောက် စက်တလုံးက မြေဖို့ လူနည်းနည်းနဲ့ နံရံ အရှည်ကြီးကို ခဏလေး ကာသွားတာ။ တို့ဆီမှာများ ပေါက်တူးတွေနဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း ချွေးပြိုက်ပြိုက်ကျအောင် တူးနေ လုပ်နေတာ မြင်ယောင်ပြီး ပြည်တွင်းက လူတွေကို သနားလိုက်တာ။ မဝေရေ အိမ်အလုပ်လည်း အများစုက စက်နဲ့ပဲ လုပ်တော့ မလိုအပ်တာအတွက် အချိန်ဖြုန်းစရာ မလိုလို့ အချိန်ပိုတွေ များများရတာပေါ့။ မှီဆို တမနက်ပဲ အိမ်အလုပ်လုပ်ပြီး တနေကုန် ရွာထဲမှာပဲ။
ဟုတ်တယ်မဝေရေ အခြေခံစားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေမှာ အပိုအလုပ်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေရတာ
ကတော့ ပြောမနေနဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာမှမယ်မယ်ရပြောလို့မရဘဲ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေက
အများကြီးရယ် .. မလုပ်လို့ကလဲ မဖြစ် လုပ်ပြီးသွားရင်လဲ ဘာမှ ပြောပလောက်အောင် အကျိုးကမရှိ
ဒီလိုအချိန်တွေကို အကျိုး၇ှိရှိသာ အသုံးချခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန်ပေါ့ …
တယောက်တည်း နေကြောင်း ရပ်သိရွာသိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့… ညဘက်တံခါးတွေ လုံလုံခြုံခြုံ ပိတ်ဖို့ မမေ့နဲ့ မဝေ
You shouldn’t open the windows except sunshine days.And you can also request to your boss about these matters, if possible.Because, his(your boss) building will be destroyed in long-trem by these situation.
ဘောစ်ကိုပြောထားပါတယ်။ တစ်နှစ်တော့ သီးခံပေးပါတဲ့ … အခန်းပြောင်းပေးပါ့မယ်တဲ့ ..
နာဂစ်ဖြစ်ပြီးနောက် အခုလောက်အခြေအနေအထိ ဆိုးသွားတာလို့ ပြောပါတယ် …
အိမ်မှာတော့ မိသားစုဝင်တွေ ရာဂဏန်း ရှိတယ်။
လူမြင်ရင် အားလုံးက ၀မ်းသာ အားရ ရင်ခုန်နေကြတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေကြတယ်။
အစာ ချ ပေးလိုက်ရင် သူတို့ ရင်ခုန်စွာကြည့်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေ လွဲသွားကြပြီး အစာနောက် လိုက်ပြီး အလုအယက် စားသောက်ကြတယ်။
သူတို့လေးတွေ ကျန်းမာရေး သန့်ရှင်းရေး တာဝန်ယူပေးရသေးတယ်။
အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းရေး နဲ့ အလုပ်ကိုလည်း တာဝန်ချိန် မလစ်ဟင်းအောင် သွားရသေးတယ်။
စိတ်ပျက်တယ်.. လောကကြီးက ဖုန်တွေ တက်နေတယ် မလှပတော့ဘူး။ အဟင့်..
ဝေဝေကမှ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကုန်သွားသလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖြစ်သေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ တနေ့တနေ့ ဘယ်လိုအချိန်ကုန်သွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး။ အကျိုးရှိတာတွေကို ဘယ်လောက်လုပ်ဖြစ်သလဲ၊ အကျိုးမရှိတာတွေ ဘယ်လောက်လုပ်မိသွားသလဲတောင် မသိတော့ပါဘူး။
အဲဒါက ဖြစ်တည်မှု တစ်ခုပဲ မဝေ …။ အစကတည်းက မဝေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်တည်မှုပဲ..။ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တာ ကိုယ် အပြစ်တင်လို့ မဖြစ်ချေဘူးနော်…။
အိမ်ငှားတင်လိုက်ဗျာ..။ ပင်ပန်းတာနဲ့ ကြေသွားအောင်။ သူဌေးလာမေးရင် နင်အိမ်ခေါင်မိုးမပြင်ပေးလို့ လူငှားတင်ရတယ်ဖြေလိုက်..။